Ikheli le-IP 192.168.8.1 isetshenziselwa ukuxhumana ngaphakathi kwamanethiwekhi omuntu nezinhlelo ezahlukahlukene. Ibuye isetshenziswe lapho kuqala inqubo yokungena ngemvume ukucacisa amathuluzi enethiwekhi. Ukufinyelela ku-192.168.8.1 faka i-Ip kubha yekheli lesiphequluli sakho sewebhu, noma chofoza isixhumanisi esingezansi.
192.168.8.1 Ukungena Ngemvume
Ngenkathi iyinethiwekhi yomuntu siqu, kusho ukuthi ingabanikazi bokuqala ngasikhathi sinye ngokulandelana kwe-serial kumanethiwekhi ahlukile. Ama-PC angenalo uxhumano lwenethiwekhi kufanele ahambisane nenqubo ye-intanethi ye-TCP noma ye-IP ngayinye.
Ukungena ngemvume kwe-192.168.8.1
Ungangena kanjani ngemvume ku-192.168.8.1?
Ikheli le-IP libalulekile lapho ufisa ukungena ku-router yakho. Isinyathelo sokuqala ukufinyelela ezinye iziphequluli zewebhu bese ufaka ifayela le- https://192.168.8.1 isixhumanisi ebhokisini le-URL lesiphequluli manje cindezela ku 'Faka ukhiye.
Kuvulwa iwindi elisha elikukhuthaza ukuthi ungene kuma-ID. Ngemuva kwalokho uzosebenzisa amadiploma wokungena okuzenzakalelayo ukuthola ukungena kusixhumi esibonakalayo se-router.
Ngemuva kokuthi indlela yokungena ngemvume ichuma, uzomiyiswa ekhasini eliyisiqalo le-router. Kuphaneli yomlawuli, ungaguqula izilungiselelo eziningi ukuze zifane nezinqubomgomo zenethiwekhi yakho nezokuphepha.
Ukushintshashintsha ikheli lakho le-IP akunconywa njalo uma kwenziwa nguchwepheshe ofundile.
Ukhohlwe Igama lomsebenzisi ne-IP Ikheli?
Uma ukhohlwa igama lomsebenzisi ne-password engu-192.168.8.1 ungasesha iManuwali / Ibhokisi le-Router. Ungasesha uhlu lwethu lomzila lwamagama abasebenzisi namaphasiwedi azenzakalelayo.
Ukusetha kabusha umzila
Uma ushintshe igama lomsebenzisi / iphasiwedi ezenzakalelayo futhi uyikhohliwe, okuwukuphela kwendlela yokubuyisela ukufinyelela ukusetha kabusha i-router ekucushweni okuzenzakalelayo, okuzobuyisela lonke ushintsho kuzilungiselelo ezizenzakalelayo. Ukusetha kabusha i-router yakho:
Thatha into ekhonjiwe, njengenaliti noma isiqeshana sephepha, bese ubheka inkinobho yokusetha kabusha emhlane we-router yakho.
Uzothola inkinobho encane eyimfihlo. Cindezela bese ubamba inkinobho enento ekhombayo cishe amasekhondi ayi-10-15.
Lokhu kuzobuyisa zonke izinguquko ezenziwe emuva kwezokuqala, kufaka phakathi igama lomsebenzisi / iphasiwedi oyishintshile. Ngemuva kwalokho ungangena ngemvume usebenzisa izifakazelo zakho zokungena ngemvume ezizenzakalelayo.
Kujwayelekile kwesinye isikhathi ukuhlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene nge-router yakho. Uma ungeke ukwazi ukudlula esikrinini sokungena ngemvume, udinga ukukhumbula ezinye izinto. Qinisekisa ukuthi i-intanethi ihlala izinzile futhi ayishintshi. Enye indlela ukusebenzisa i-Command Prompt ukunquma isango elizenzakalelayo. Ikheli le-IP elingalungile ongalisebenzisa ukufinyelela i-interface yomsebenzisi. Ungaxhumana futhi nomhlinzeki wesevisi ye-inthanethi ukuze uthole olunye usizo.
'192.168.8.1'ikheli le-IP eliyimfihlo. Leli ikheli le-IP elaziwa kakhulu ngokwesibonelo '192.168.0.1' & '198.168.0.1' ngoba inokusebenza okufana nokwaba-2 abasele okuwukuphela komehluko ukuthi i-'192.168.8.1' ayisetshenziswa yi ubuningi bezinkampani zerutha. Izinkampani ezifana neMediaLink, iHuawei zisebenzisa leli kheli le-Protocol net.
Kufanele wazi ukuthi wonke ama-routers afaka izinhlobo ezi-2 ezahlukahlukene zamakheli we-IP. Ikheli le-IP elitholwe kunethiwekhi yendawo elibizwa ngekheli le-LAN IP kanti okunye kunikezwa yimodemu ebizwa ngekheli le-WAN IP. Ikheli le-IP '192.168.8.1' livame ukusetshenziselwa ukufinyelela ekusebenzeni komzila. Leli kheli le-IP lisetshenziselwa ukucushwa kwethuluzi lenethiwekhi.
Ekuqaleni ungalithola kanjani ikheli le-IP lomzila.
Okokuqala, xhuma umzila wakho ku-PC noma elinye ithuluzi ngendlela efanele. Udinga ukwazi ukuthi ukuvula iphaneli yomlawuli we-router udinga ukuxhuma ku-router ngokufanele. Futhi awudingi noma yiluphi uhlobo lokuxhumeka kwe-inthanethi ngalokhu.
Ngakho-ke, udinga ukujwayela ikheli le-IP lomzila wakho. Ungahlonza ikheli le-IP lomzila wakho ngokuvakashela umyalo we-Prompt ku-Laptop.
Indlela ehlukile yokuvakashela ikheli le-IP le-192.168.8.1
Ungaguqula ikheli le-IP lomzila noma kunini ngezindlela ezi-2 ngokuvula i-CD ethize yokusetha ngokusebenzisa i-web- interface. Kubalulekile kuningi lethu ngoba amaklayenti amaningi afuna ukuqinisekisa ukuthi akukho ukuhlangana kwekheli le-192.168.8.l nelinye ikheli ledivayisi. Uma noma ubani ekhohlwa ikheli lakhe le-IP lakamuva, ngakho-ke angahle asethe kabusha i-router bese yonke into izophinda iqale kabusha ibe yiphutha. Ngaphezu kwalokho, noma ngubani angalandelela ikheli lakhe le-IP abelwe lona ngokufuna nje i- “IP yami” esikhaleni sosesho lweGoogle. Impela, izobuyela kukheli lakho le-IP owabiwe ngalo.
Okwamanje iya kusiphequluli sakho esizenzakalelayo noma isiphequluli esithile esihlukile bese ufaka ibha yekheli le-IP https://192.168.8.1 esikhaleni sekheli lesiphequluli. Lokhu kuzokukhombisa indawo ethile futhi kukungenise ukungena ngemvume kuphaneli yomlawuli we-router.
Lapha, udinga ukubhala igama lomsebenzisi nephasiwedi yomzila wakho ukufaka i-router admin panel yakho lapho ungashintsha izinketho eziningi ezifana ne-Proxy, izinketho zokuphepha, ukuphathwa kwenethiwekhi, izilungiselelo ze-WLAN, isoftware yomzila nokunye okuningi.
Uma ungakhumbuli igama lomsebenzisi ne-password router okufanele ukwenze?
Abantu abaningana kungenzeka bangakhumbuli igama lomsebenzisi nephasiwedi yabo. Ngakho-ke kunencazelo yalabo ababesebakhumbulile Igama lomsebenzisi ne-password.
Kungahle kube khona icala lapho ungakhumbuli khona amagama abasebenzisi nama-passkeys. Esimweni esinjalo, kufanele uyizingelele kumkhiqizo we-router kanye nenombolo yochungechunge lwe-router nekheli lokungena ngemvume.
Icala elilodwa futhi kungenzeka ukuthi wehlulekile ukukhumbula ukhiye wakho wokungena. Ngakho-ke, udinga ukusetha kabusha izilungiselelo zerutha ngokhiye wokusetha kabusha okuyimfihlo ku-router.
Elinye icala kungenzeka ukuthi awukaze uguqule imininingwane yokungena ngemvume ye-router yakho ukuze ufune eyakho ukungena ngemvume okuzenzakalelayo komzila Omazisi enetheni.
Manje uma wazi imininingwane yokungena kwe-router, ungabhala kuma-ID wakho we-router ekhasini lewebhu bese uyatholakala kuphaneli yomlawuli we-router.
Ungasetha kabusha i-router ngekhasi lasekhaya lokusetha elisuselwa kuwebhu.
Ekugcineni, ucacise amaphuzu ambalwa mayelana nefayela le- 192.168.8.1 Ikheli lephrothokholi ye-inthanethi. Kunolwazi oluningi kuma-routers, amamodemu angenazintambo, amakheli we-IP, nokunye okuningi okunikezwe kule ngxenye. Leli kheli le-IP lizokusiza ukumisa inethiwekhi ye-broadband endlini ngaphandle kokubhekana nezinkinga eziningi. Ngiyethemba ukuthi lokhu kube wusizo kini nonke ukufinyelela kwinethiwekhi yomzila wakho futhi ngokuqinisekile kukhulise imininingwane yakho ekhelini le-IP.